प्राग के गर्न? हेर्नुहोस् र प्राग के - यात्रा सुझाव
मध्ययुगीन वास्तुकला को आकर्षण, पार्क र बगैचा परिसर, उत्कृष्ट किनमेल र पुरातन नुस्खा संग सख्त अनुसार पीसा बियर को सौन्दर्य - यात्री चेक राजधानी पूरा त। प्राग के गर्न? यो प्रश्नको जवाफ तुरुन्तै शहर को हरेक अतिथि पाउनुहुनेछ। सबै स्वाद को लागि मनोरञ्जन - तपाईं शान्त लेन र Boiling क्षेत्र अन्वेषण, बस हिंड्न सक्छौं, राष्ट्रिय भोजन परीक्षण गर्न, महलों र संग्रहालयहरु गर्न हिंड्न।
प्राग के भ्रमण गर्न: संग्रहालयहरु
Wenceslas स्क्वायर - पर्यटकहरु को बहुमत राजधानी संग ज्ञान सुरु ठाउँमा। राष्ट्रिय संग्रहालय - प्राग हेर्न पहिलो कुरा शहर को हरेक अतिथि बाध्य छ। यो प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा स्थापित भएको थियो जो यो भवन, मा, यो यसको शुरूआत देखि चेक गणतन्त्र को मुख्य शहर सबै स्मृति केंद्रित थियो। पुरातन संसारको कला connoisseurs जस्तै इतिहास विभाग। पुरातत्व क्षेत्र देशको इतिहास पहिल्याउन हुनेछ। numismatics विभाग साँचो संग्रहकर्ता प्रभावित।
मुख्य धन नजिकै प्राग - ठाँउहरु। शहर ऐतिहासिक संग्रहालय को समीक्षा आफ्नो यात्रा अमेट छाप छोड्न भनेर संकेत गर्छ। यहाँ पर्यटकहरु शहर को जीवन बासिन्दा विषयको पुरातन समयका मा प्रदर्शन पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्रमिक परिवर्तन चेक संस्कृतिको बारेमा छ।
प्राग के गर्न मूल ठाँउहरु आकर्षित भएका ती? राजधानी सबैभन्दा रहस्यमय भवनहरु को एक - यातना को प्रसिद्ध संग्रहालय मा जानुहोस्। भित्र आफ्नो पर्खालहरु 60 भन्दा बढी बन्दुक, समावेश जो संग एक पटक वास्तविक मानिसहरूलाई पीडित हुन्छ।
प्राग: प्रसिद्ध महल
गर्न सक्छन् दरबार जटिल एउटा सानो शहर जस्तो? हो, लम्बाइ र 570 भन्दा बढी र 120 मिटर, क्रमशः चौडाई भने। प्राग क्यासल - स्थान लिन जो गर्नुपर्छ चेक राजधानी को कुनै पनि आगन्तुक महल, पहिलेका। उसले युरोप मा भारी वास्तु जटिल बुझेका छन्। हाल, भवन एक निवास रूपमा देशको राष्ट्रपति प्रयोग गर्दछ। तपाईं निश्चित गार्ड को दैनिक परिवर्तन हुँदै पकड गर्नुपर्छ। यो एक भव्य अमरीकी छ।
के महलों अझै पनि प्राग गर्न पर्यटकहरु luring? टाढा देश बाहिर गए समीक्षा जो आकर्षण, - को Vysehrad, Troja Chateau छ। Vysehrad 10 औं शताब्दीमा फिर्ता बनाइएको थियो। तपाईं चिरपरिचित मिथक विश्वास गर्नुहुन्छ भने, यो स्थित छ जो मा पहाडी छ, राजधानी आधार बिन्दु बनेको छ। यसको क्षेत्र प्रसिद्ध छ गोथिक गिर्जाघर।
Troja महल निर्माण दुई शताब्दीपछि जसको वास्तुकला बारोक निर्देशन पर्छ पहिलो चेक दरबार, भयो। प्राग के भ्रमण गर्न, तर एक ठाउँमा तपाईं जहाँ मान्छे मा ट्रय को युद्धमा चित्रण गर्ने दृश्यहरु आनन्द उठाउन सक्छौं। आर्किटेक्चर संलग्न र ग्रीक देवताहरूको तस्बिरहरू।
जहाँ प्राग आराम गर्न
यात्री अध्ययन साइटहरू, चेक गणतन्त्र को राजधानी को उचित गर्व छ जो थकित भएका, सबै भन्दा प्रसिद्ध पबहरूमा मध्ये एक मा आराम गर्न सक्षम हुनेछ। प्राग को महल उठाइरहेका ती तुलना धेरै संस्थाहरू को लोकप्रियता।
"के Vleck" - प्रसिद्ध चेक बियर, फिर्ता 15 औं सताब्दी आगन्तुकहरूलाई लाग्छ। तपाईं केवल गाढा बाक्लो बियर ब्रान्ड, एक उत्कृष्ट कर्मेल स्वाद संग endowed थाह गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त, तर पनि राष्ट्रिय भोजन को सबै भन्दा राम्रो काम आनन्द।
"सेन्ट थोमस" - जो बियर को उत्पादन 1352 साथ सञ्चालन गरिएको छ एक संस्थाले। ती दिन यो darkened छिंडीमा टेस्टिङ लागि स्थानको रूपमा पहिचान गर्ने Augustinian, भिक्षुहरूले गर्न belonged। अतिथिहरूको भठ्ठी पक्कै वफादार ग्राहकहरु मा आकस्मिक आगंतुकों बनाउँछ जो foamy "Brannika" स्वाद को एक मग प्रयास गर्नुपर्छ।
जहाँ प्राग हिंड्न
, गर्न सक्छन् किनमेल आगन्तुकहरूलाई एक पैदल संयोजन पेरिस बाहिर मार्ग रूपमा छान्नुभएको भएको। यो ब्रांडेड बुटीक एक एकाग्रता भयो। जो आरामदायक प्राचीन पसलहरूमा लागि प्रतीक्षा, आधुनिक फेशन गर्न पुरानो दिन रुचि ती। आभूषण को एक विस्तृत चयन एक चिरपरिचित सैलून प्रदान गर्दछ "Uhlíř।"
नदी वाल्क प्रेम गर्ने पर्यटकहरुका लागि प्राग के गर्न? तपाईं निश्चित प्रसिद्ध नदी VLTAVA साथ एक सवारी लिनुपर्छ। यसको बैंकहरू यात्री को अविस्मरणीय दृश्य रमाइलो गर्न सक्षम एक pedalo मा चढाई वा ठूलो जहाज एक मिनी-क्रूज मा जानेछन्। तपाईं बस हाइपनोटिक प्रवाह प्रशंसा, को पुल मा एक टहलने लाग्न सक्छ।
निर्माण, शहर मध्य युग मा प्राप्त जो - यो चार्ल्स ब्रिज मा टिप्पण लायक छ सुनिश्चित। उहाँले मानिन्छ एक को VLTAVA नदी को "हार", यात्री को बारोक को सबै भन्दा राम्रो परम्परा सिर्जना अचम्मको मूर्तिहरू enchants।
सबैभन्दा सुन्दर उद्यान
जो शान्त सौन्दर्य घेरिएको आराम गर्न चाहनुहुन्छ ती लागि प्राग के गर्न? दुई सय उद्यान को प्रसिद्ध राजधानी को एक जानुहोस्। तिनीहरूलाई धेरै उमेर त्यहाँ, धेरै सय वर्ष पुरानो हो धेरै पहिले monastic संपदा फिर्ता सिर्जना गरियो। सताब्दी पछि शताब्दीमा एक सुरिलो टुकडी को गठन गर्न नेतृत्व जो एक नयाँ हरियो खाली ठाउँहरू, थपियो। प्राग को अचम्मको ल्यान्डस्केपिङ्ग उद्यान एक indelible छाप पार्छ।
आगंतुकों Riegrovy उद्यानमा खुला शहर को अचम्मको दृश्य। यहाँ तपाईँले पुरा परिवार को लागि एक महान outing संगठित गर्न सक्नुहुन्छ। को 13 औं शताब्दीमा सिर्जना Wojanów उद्यान मा पर्यटकहरुका लागि पुरानो पर्खने संग सम्पर्क गर्नुहोस्। को 19 औं शताब्दीमा प्राप्त इलाका को आधुनिक फारम - रूखहरू, मोर खुलेर, जो तपाईं खुवाउन सक्छन् strutted। यो पराउँछु र 17 औं सताब्दी हेर्न रोचक छ, पार्क मा उपस्थित छन्।
चर्च र प्राग को cathedrals
यो मुख्य भ्रमण गर्न शायद सम्भव छ चेक गणतन्त्र को शहर र सेन्ट Vitus को प्रसिद्ध गिरजाघर द्वारा पारित। एक अद्वितीय मन्दिर 1344 देखि निर्माण, निर्माण आधा सहस्राब्दी लामो थियो। चर्च को क्षेत्र मा जो भण्डारण गर्दछ sarcophagi शासक चार्ल्स चतुर्थ र आफ्नो परिवारलाई चिहान छ। त्यहाँ पनि मुकुट Jewels रक्षा, एक स्टोर छ।
Tyn चर्च, 14 औं शताब्दीमा निर्मित - को गोथिक शैली को उदाहरण। यहाँ, पर्यटक 1420 मा गरेको Madonna को प्रसिद्ध मूर्ति, देख्ने। को गिर्जाघर को क्षेत्र मा फिर्ता 14 औं शताब्दीमा गर्न डेटिङ पुरातन टिन बप्तिस्मा फन्ट संरक्षित।
प्राग नयाँ वर्ष: के
पुरानो टाउन स्क्वायर वर्ष को यो समय को बिन्दु हुन्छ क्रिसमस मेला। नयाँ वर्षको के प्राग गर्न, तिनीहरू तातो mulled रक्सी को एक गिलास प्रसिद्ध ससेज मदत छैन? स्थानीय भोजन को सबै भन्दा राम्रो नमूनाहरू गर्दछ जो रेष्टुरेन्ट "प्राग पुल", मा उत्सव बैठक लागि तयारी गर्न। अनावश्यक उत्सव को Wenceslas स्क्वायर र अन्य सुन्दर ठाउँहरू चयन गरेर सडक मा सिधै गर्न सकिन्छ।
प्राग गर्मी मजा
चेक राजधानी यात्री वर्ष को कुनै पनि समय मा एक अविस्मरणीय मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ। के प्राग गर्मी मा गर्न? मुख्य महानगरीय तीन तले पानी पार्क, बच्चाहरु को आनन्द हुनेछ जो जानुहोस्। मनोरञ्जन र मनोरञ्जन केन्द्र जटिलता विभिन्न स्तर द्वारा प्रतिष्ठित छन्। रमाइलो र अनुभवी swimmers, र सबै भन्दा सानो मान्छे त्यहाँ पाउनुहुनेछ।
को छाया मा scorching सूर्य देखि लुकाउन नुन गुफाहरु, राजधानी को दिल मा स्थित मा सम्भव छ। प्राग यस्तो मनोरञ्जन को विकल्प असाधारण स्वास्थ्य लाभ हुनेछ - वर्तमान समुद्री हावा को समर्थन मा। गुफाको निर्माण संग नुन को2भन्दा बढी टन को हिमालय देखि र मृत सागर इलाका देखि ल्याए प्रयोग भएको थियो।
प्राग मनोरञ्जन एक बिट चरम हुन सक्छ। जटिल Skydive एरिना - सधैं एक प्याराशुट संग कूद को सपना देख्यो गर्नेहरूका लागि सही ठाउँ। अतिथिहरूको संस्थाहरू लामो प्रशिक्षण समय खर्च छैन, तिनीहरूले पनि विमान मा चढ्नु पर्दैन। पर्यटकहरू निःशुल्क गिरावट अनुकरण हुन्छ जसमा एक विशेष हावा टनेल, आशा गर्न सक्छौं। यस्तो मनोरञ्जन भाग लिन मौका थियो जो मान्छे, तिनीहरूले साँच्चै प्याराशुट एक जम्प दौडान ती समान छन् महसुस भनेर कसम।
प्राग - अतिथि सबै स्वाद को लागि मनोरञ्जन प्रस्ताव जुन शहर,: संज्ञानात्मक शान्त, चर्को, चरम। हामी विकल्प एक विस्तृत दायराबाट मात्र चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
जनवरी मा इस्राएललाई एउटा यात्रा: मौसम, रिसोर्ट्स, यात्री लागि सुझावहरू
सान फ्रान्सिस्को - अद्वितीय आकर्षण
Betta गाउँमा: समीक्षा र पर्यटक फोटो
अलेक्जेन्डर Nevsky चर्च (चेल्याबिन्स्क): इतिहास र विवरण
थाईल्याण्ड मा सबै भन्दा राम्रो रिसोर्ट्स
मई मा ग्रीस मा तापमान। म वसन्त को अन्त मा छुट्टी मा जान सक्नुहुन्छ?
इजरायल मा आतंकवादी हमला कसरी लामो जारी हुनेछ?
एक चार्टर उडान के हो
के हो नवजात शिशुहरु मा hiccups को कारण
सबैभन्दा महंगा ब्रान्ड कार भूत र वर्तमान
Anton Ivanov - सर्वोच्च मध्यस्थता अदालत अध्यक्ष
गत्ता अभ्रक। गुण र आवेदन।
दोहोरो नागरिकता रूस मा निषेधित छ? रूसी संघ मा दोहरी नागरिकता मा व्यवस्था
बचत बैंक मा एक बंधक कसरी प्राप्त गर्न र miscalculate छैन
पत्रुस र पावल पार्क, Yaroslavl: समीक्षा, फोटो
साइप्रस गाँउहरु परम्परागत हाउस3*, साइप्रस: वर्णन, आवास, समीक्षा
यो मास्को मेट्रो मा खोल्छ कति को प्रश्नको जवाफ?
खेल मनिटर 144 हर्ट्ज: समीक्षा, चश्मा, निर्माताहरू र समीक्षाहरू